Speedtest MY-IP-IS.com - Tarisa internet yako connection speed
IPv4 uye IPv6 PHP Subnet Calculator
Chiyero ichi chinokuudzei?
Iwe uri kuenda kuedza yako Internet connection kuti uwane pfungwa yakawanda yehuwandu hwebasa rako nekukurumidza. Kuti zvive zvakananga, zvidzidzo zvaunogamuchira ndezvekutsvaga kwekukurumidza, upload upload uye latency.
Iyi ndiyo nzira yakakodzera mimhanzi, mafirimu nemavhidhiyo, kana ruzivo runobva kune webhusaiti kana zvimwe zvinyorwa paInternet kune kombiyuta yako.
Izvi zvakasiyana. Izvi zvinokutaurira kuti mifananidzo yakajeka sei kana mafaira ekutengesa kubva kombiyuta yako kuenda pane imwe nzvimbo, zvakadai sekuisa chithunzi kune webhusaiti.
Iyo inozivikanwawo sehuwandu hweping, nhamba iyi inofananidzwa nekunonoka nguva paIndaneti yakaenzana millisecond. Iyo yakakwirira nhamba, iyo inowedzera kunonoka yaunowana uye inogona kunzwa kana iwe uri paIndaneti. Kana iwe uchitamba mitambo yepaIndaneti, kunyanya munhu-kupfura kana kutamba mitambo, zvino unoda latency kuva pasi pe30ms. Kana isu tose zvedu, chinhu chipi nechipi pasi pe100ms chaizova chakakwana. Kakawanda nyaya, asi ... Pane zvinhu zvakawanda zvinogona kuchinja yako Internet connection speed pane chero nguva yakatarwa, kunze kwekuti unhu hupi hwehutano hwaunahwo, hwakadai sedambo kana DSL. Kana vanhu vanoverengeka mune imwe imba vari paIndaneti panguva imwechete, vachitamba mitambo uye vachitamba mumhanzi kana mavhidhiyo, Indaneti inogona kukurumidza. Uyewo, nguva yekombiyuta yako kana modem inogona kunge iri chinhu, nokuti teknolojia inoramba ichivandudza. Kunyange zvakadaro, kana iwe usingafari nemafambiro ekutambisa (kana kuti kunonoka) kweInternet connection yako, taura nemupi wako webasa uye ona zvavanotaura. Iva nechokwadi kuti uwane mazano avo nezvekuvandudza mafambiro ako pasina kushandiswa kwebasa.
My-ip-is.com ibasa rinopa ip address yako uye mamwe mashoko akawanda.
Dzidza zvakawanda pamusoro pe IP ma kero My Ip Is pane WikiPedia. Zvimwe DNS Tools inogona kuwanikwa pa MXcorrect.com
My ip inowanikwa mu: Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Basque Chiberaruzi Bengali Bosnian Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese (Chakarerutswa) Chinese (Traditional) Corsican ChiCroatian Czech Danish Dutch Esperanto Estonian omuPhilippines Finnish French Frisian Galician rechiGeorgian German ChiGiriki Gujarati Haitian Creole Hausa Hawaiian Hebrew Hindi ChiHmong Hungary Icelandic Igbo Indonesian Irish Italian Japanese ChiJavanese Kannada Kazakh Khmer korean Kurdish (Kurmanji) Kyrgyz Lao Latin wokuLatvia Ritunia Kurdish Macedonian Malagasy ChiMalay Malayalam Maltese Maori Marathi Mongolian Myanmar (Burma) Nepali Norwegian Pashito Persian poricha Portuguese Punjabi Romanian Russian Samoan Scottish Gaelic ChiSebhiya Sesotho shona Sindhi Sinhala Slovak Slovenian Somali Spanish Sudanese Swahili Swedish Tajik Tamil Telugu Thai Turkish Ukrainian Urdu Uzbek Vietnamese Welsh Xhosa Yiddish Yoruba Zulu